Civil 3D N'ezie maka ọrụ obodo - Ọkwa 4 - Geofumadas
Akara akara, ihe nhicha ọcha, ngwugwu, ntanetị. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere na Nyocha na Ọrụ Obodo
Nke a bụ nke anọ nke ihe Usoro 4 akpọrọ "Autocad Civil3D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga-enyere gị aka ịmụ ka esi ejikwa ngwanrọ Autodesk dị egwu ma tinye ya n'ọrụ na saịtị dị iche iche. Bụrụ onye ọkachamara na ngwanrọ ahụ ma nwee ike igbanye ala, gbakọọ ihe na ọnụahịa ihe owuwu ma mepụta atụmatụ dị ukwuu maka okporo ụzọ, àkwà mmiri, ọwa mmiri, n'etiti ndị ọzọ.
Usoro ihe ọmụmụ a abụrụla ngwaahịa nke oge raara onwe ya nye, ọrụ na mbọ ọ bụla, na-achịkọta data kachasị mkpa gbasara isiokwu nke Civil and Topographic Engineering, na-achịkọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ma mee ka ha baa uru, ka i wee nwee ike mụta ihe dị mfe na Ngwa maka mkpụmkpụ ma dị mkpirikpi maka isiokwu ọ bụla ma na-eme data niile (ezigbo) na ihe atụ anyị na-enye ebe a.
Ka anyị mee ka ị mata ụwa a nke Autocad Civil3D, nke bụ ngwá ọrụ dị ike iji belata nnukwu oge ịchebe na ịgbakọ na ịkwado ọrụ gị na ngalaba ọkachamara.
Iwu nke etiti (4 / 4)
- Ewu ulo.
- Atụmatụ mbara ala nke akpaaka.
- Automatic ọgbọ nke ụgbọ elu na profaịlụ.
- Automatic ọgbọ nke cross ngalaba ụgbọ elu.
- Nkọwapụta na nhazi.
- Ighalo na nbido nke mkpọda ugwu.
- Udiri olu.
- Ọdịdị elu.
NWA EGO- Oruba ulo uka.
- dinggbakwunye alaka
- Nweta ọrụ dịịrị afọ gafere
- Ewu ulo gburugburu ma ọ bụ gburugburu ọnụ ụzọ.
- Ngụkọta akụkụ nke mpaghara na dayameta
- Englobes na desenglobe
OGWU ANYA ANWETA SURFACE
- Nhazi elu
- Ọwara mmiri na mpaghara mmiri
OFSỌ TLỌ NGW SKWỌ SANITARY NA PIP
- Ntinye uche
- Ngụkọta akụrụngwa
Previous Post«Previous Okwu mmalite nke usoro mmemme
Next Post Usoro 3D Civil maka ọrụ obodo - ọkwa 3Next »